> Resource > iPad > 2 Methods in kaabta iPad Data si Mac OS X in Mavericks
Backing ilaa xogta iPad si aad u Mac si joogto ah furfuraya badan oo xujooyinka aad mar kasta isku daydo in aad soo celinayo iPad, sida hawada iPad. Sidaas, waxaad marnaba u dayn ka badiyay xog muhiim ah isag. Haddii aad hadda uun la casriyeeyay aad Mac OS in Mavericks oo ku saabsan in la taageero ilaa dhamaan xogta on your iPad yihiin, halkan iman karin. In this article, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso laba hab oo si gurmad aad hawada iPad, iPad mini bandhigay isha, iPad Cusub, iPad mini, iPad la isha bandhigay, iPad 2 iyo iPad gabi ahaanba. Waxaad iskaan karaan hababka kala duwan oo go'aansato midka waa ka fiican sida ay baahidaada gaarka ah.
Xogta Habka 1. kaabta iPad u Mac OS X in Mavericks via Lugood
Habka 2. iPad gurmad xogta ku Mavericks aan Lugood
Xogta Habka 1. kaabta iPad si Mac OS X in Mavericks via Lugood
Lugood waa tababare xogta wanaagsan iPad ay taageerto kor u iPad goobaha, xogta app iyo app, music iibsaday, buugaag, ay muujinayso TV, fariimaha, ringtones iyo kuwa kale. Raac tilmaamaha hoos ku qoran si xog gurmad on iPad si Mac OS X in Mavericks talaabo talaabo ah.
Tallaabada 1. Daahfurka Lugood on Mac OS X la Mavericks
Tallaabada 2. Isku aad iPad si Mac leh USB cable Apple.
Tallaabada 3. Dhinaca bidix, guji si aad iPad hoos AALADAHA category si ay u muujiyaan maamulka guddi iPad.
Tallaabada 4. On guddi saxda ah, guji Back Up Hadda aad u bilowdo hawsha gurmad.
Iyadoo talaabooyinkan, aad awoodo gurmad xogta aad iPad si Mac OS X socda Mavericks gabi ahaanba. Si kastaba ha ahaatee, raad raac habka soo baxday in ay waqti lumis iyo file gurmad ma karo si toos ah u akhri. Taa ka sii daran, Lugood aan dib files warbaahinta synced in aad iPad ka Mac caawin kara. Sidaas darteed, haddii aad rabto in gurmad xogta iPad oo aad rabto inaad aragto music, sawiro iyo video aan xadeyn, waxaad raaci kartaa habka labaad.
Raadinta hab lagu gurmad iPad music, video iyo sawiro, gaar ahaan kuwa goolka ka soo meelo kale oo Lugood marka laga reebo, si Mac OS X in Mavericks? Desktop ayaa awood badan iPad si Mac qalab kala iibsiga - ka TunesGo Wondershare (Mac) si buuxda u la kulmo baahida aad. Waxay kaa caawinaysaa inaad gurmad oo dhan ama music soo xulay, video iyo sawiro in standalone files waqti yar.
Dadka isticmaala Windows, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo in gurmad music, xiriirada, fariimaha, sawiro, videos.
Tallaabada 1. Isku aad iPad iyo ordi qalab
Isticmaal ah USB cable Apple in ay ku xidhmaan aad iPad si Mac iyo ordi qalabka. Suuqa ayaa aasaasiga ah ku tusi doonaa ilaa aad screen Mac ayaa, soo bandhigeen aad info iPad galay qaybaha kala duwan.
Fiiro gaar ah: Inkasta oo nidaamka gurmad oo dhan uma baahna Lugood, waxaad weli u baahan yihiin in ay ku rakibi on Mac si loo hubiyo TunesGo ah (Mac) si caadi ah u shaqeeyo.
Tallaabada 2. xogta kaabta ka iPad ee Mavericks
On galeeysid bidix, waxaad ka arki kartaa files on iPad halkan ku qoran. Guji mid ka mid ah nooca file iyo aad u galaan suuqa kala maamulka. Markaas, dooro faylasha aad go'aansato in aad iyaga gurmad si Mac OS X in Mavericks.
Riix Music , heeso dooran> guji dhoofinta > files Music waxaa taageeray ilaa Mac
Riix Photos > Select photos> guji dhoofinta in sawiro gurmad ka iPad Camera Roll, Photo Stream oo Photo Library si Mac.
Riix Movies > Hubi video ah> Riix dhoofinta in gurmad ah videos doortay.
Ka dib, kuwaas oo files aad Mac taageerto kor u, doonaa mar dambe ma aad walwalo khasaaro xogta. Oo TunesGo (Mac), waxaad doontaa in ay nuqul ka files kuwaas oo ka Mac in qalab kasta Apple, sida iPod taabto, iPhone iyo iPad.
Download TunesGo in ay isku day ah!
Sida loo Delete Photos ka iPad ah
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone in PC
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Computer
Top 3 Siyaabaha Qabtaan iPad Recovery Password
Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Android inay iPad
iPad xayiran Recovery Mode ka dib markii Update - dayactir Waxaa